Ishende nomfelokazi ecaleni lokusoconga
Isithombe esigciniwe: Independent Media
KHULEKANI MASEKO | December 3, 2019
USHAQEKILE umndeni kuboshwa umakoti neshende elisolwa ngokuba yinkabi ecaleni lokubulawa komkhwenyana, owadutshulwa esemzini wabo KwaGqikazi, oLundi, ngo-Agasti nonyaka.
Laba ababili ezibakhalele belele ndawonye KwaMashu eThekwini ngezintatha zangoLwesihlanu, bavele enkantolo yemantshi eMahlabathini izolo.
Umufi uMnuz Bongumusa Zungu (38), okuthiwa ubeyigosa le ngoma elaziwayo esigodini sakubo, kuthiwa ubesemzini wakhe ngesikhathi kungena abazibize ngamaphoyisa bacela ukuthi umakoti wakhe (umsolwa) aphume ngoba sebeyasebenza basala badubula umufi.
Udadewabo kamufi, uNksz Fisani Zungu, uthe namanje kusenzima ukukholwa ukuthi kuboshwe umakoti wakubo ngokufa komfowabo.
“Kusishaqisile kakhulu ukuthi kuboshwe yena. Besingamsoli ekufeni komfowethu, empeleni sethukile kodwa siyogezeka izinhliziyo mhla inkantolo yamthola enecala.
Okwamanje sisakholwa ukuthi yizinsolo nje,” kusho uNksz Zungu.
Uthe nakuba bengathandi ukukholwa ukuthi lo mfelokazi uyathinteka ekubulaweni kwendoda yakhe, kodwa zikhona izinto umndeni osuke washaya amakhala ngazo.
“Ngesikhathi kudutshulwa umfowethu, samsola ngokuthi kunokuba aphume ahlabe umkhosi abikele umndeni, kodwa wakhetha ukuzithulela,” kusho uNksz Zungu.
Kuthiwa bese beneminyaka emibili bekhombene esigcawini yize bebengakabhali enkantolo.
Umthombo obusondelene kakhulu nomufi okhulume neSolezwe, uthe kwathathwa isibhamu sikamufi esisemthethweni ngesikhathi edutshulwa, kanti uveze ukuthi ngesikhathi umsolwa (ishende) eboshwa amaphoyisa, uvumile ukuthi wasithatha kodwa usibolekise abanye aqhuba nabo umsebenzi wobunkabi.
Uthe umufi ushona nje kwase kuyihlandla lesibili bemzama okwenzeke esikhathi esiyinsuku ezintathu kuphela.
“Ngesikhathi befika okokuqala, unkosikazi wakhe ube ngumuntu ophethwe yisisu wacela ukuphuthuma endlini encane. Bathe uma bengena kanti umufi kukhona asekusolile, wakhipha isibhamu sakhe wabajaha ngaso,” kusho umthombo.
Uthe ngesikhathi befika okwesibili bezenza amaphoyisa, bacela ukuthi unkosikazi wakhe aphume ngoba bafuna ukusesha umyeni, basala bamdubula.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuboshwa kwabasolwa.
“Kuboshwe abasolwa ababili abaneminyaka ephakathi kuka-25 no-27 ngecala lokubulala.
“Kulindeleke ukuthi bavele eNkantolo yeMantshi yaseMahlabathini kusasa (izolo),” kusho uCaptain Gwala.